Elona nqaku li-10 + lijongana nezinto eziphathwayo kunye noku-odola kwangaphambili izipho ku-verizon, t-mobile, at & t kunye nokuthenga okungcono
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Elona nqaku liphezulu li-10 + lihambisa iziphatho kunye noku-odola kwangaphambili izipho eVerizon, T-Mobile, AT & T nakwi-Best Buy
Elona nqaku liphezulu li-10 + lihambisa iziphatho kunye noku-odola kwangaphambili izipho eVerizon, T-Mobile, AT & T nakwi-Best Buy
Ukuba ukhathazekile malunga nexabiso leGlass yeNqaku le-10 +, khumbula nje ukuba okokuqala kwimbali yomgca weNqaku langoku, iSamsung ikhupha imodeli encinci yeNqaku 10 ehamba kancinci, kwaye kuhlala kukho umphathi ophetheyo kunye neZinto ezilungileyo zokuThenga thoba ixabiso.
Inqaku le-10 duo libonelela kakhulu kubamkeli bokuqala kunokuba iNqaku 9 lenzile ekusungulweni. Ngelixa iikiti zekhamera zisesezona zikhulu ezivela kwi-Galaxy S10 5G okanye kwi-S10 +, ii-algorithms zitshintshiwe kwaye iindlela zokudubula ezintsha ezinje ngokujolisa komsindo ekusondeleni kwividiyo. Apha ukufana kuyaphela, njengoko iNqaku 10 linoyilo olusulungeke ngakumbi kunosapho lwe-S10 olwalungenjalo xa i-S9 kunye neNqaku 9 zazisiza.
Iifowuni ezimbini ezintsha eziphathwayo eziphathwayo zezona zilinganiso liphezulu lomzimba ukuya eklasini yazo, kwaye zizalisekise iimfuno zomboniso omkhulu kunye neefowuni ezithandanayo ezitsala ngaphezulu kwe-Samsung kunye neapos; Ukuba uzimisele ukuba ne-Android & apos; zakutshanje kunye nezona zikhulu, nantsi iiapos apho ungabamba khona iNqaku 10 kunye ne-10 + e-US.
I-Galaxy Qaphela i-10 kunye ne-10 + ziya kufumaneka zombini ngokuthe ngqo kwi-Samsung ivuliwe, okanye kwiziphathi ezinje ngeVerizon, AT & T, Sprint, T-Mobile, U.S. Cellular, and Xfinity or Straight Talk Wireless. Imodeli ye-256GB yeNqaku 10 iqala ukusuka kwi- $ 949.99, engaphantsi kweNqaku 9 ekusungulweni. Iifowuni ziya kuthengiswa kwiAmazon, Best Buy, Costco, Sam's Club, Target, Walmart, nakwabanye abathengisi.
Ukongeza kwi-T-Mobile, i-AT & T kunye neVerizon kunye neeapos ze-BOGO, unokufumana ukuya kuthi ga kwi-150 yeedola ngokuthe ngqo kwi-Samsung,. Ngefowuni yesibini yasimahla, kwaye ubuncinci uBenjamin ecimile, uya kuthi ubambe eyona nto intle kwi-Android nge- $ 300 nje, akukubi ukusayina umphefumlo wakho neMelika kunye nabaphathi abakhulu. Ngaphandle kokuqhubeka, nazi ezona zintengiso zibalaseleyo kwiNqaku 10 kunye ne10 + kubamkeli bakho bokuqala:
Elona nqaku liphezulu li-10 kunye ne-10 + yokuhambisa izinto
Ixabiso leVerizon 10 kunye ne-10 + kunye neBOGO
I-Verizon yeyokuqala eya kuthwala iNqaku 10 + imodeli ye-5G, kwaye inesivumelwano esikhulu seBOGO kwiNqaku le-10 nayo. Ayikuko ukuba asizange & apos; t yilindele , Kodwa iiapos ziyaphambana ukwazi ukuba iVerizon izakunika iifowuni eziliwaka simahla. I-Samsung Galaxy Note 10, 10+ kunye ne-10 + 5G ziya kufumaneka ku-odolo kwiVerizon nge-8/23 kula maxabiso alandelayo:
I-Galaxy Note10 + 5G (6.8 ”) ikunika ukufikelela kwinethiwekhi yeVerizon's 5G Wideband yesantya esingalinganiyo kunye nokunxibelelana. Iqala kwi- $ 36.11 ngenyanga iinyanga ezingama-36 kwiNtlawulo yeDivayisi yeVerizon (0% APR; $ 1,299.99 yokuthengisa; 24 mo. Intlawulo yeVerizon yezixhobo ikwafumaneka).
I-Galaxy Note10 + (6.8 ”) inescreen esikhulu kwiGlass Note kunye namandla kunye nokusebenza ukuthelekisa. Iqala kwi- $ 45.83 ngenyanga iinyanga ezingama-24 (0% APR; $ 1,099.99 yeevenkile).
I-Galaxy Note10 (6.3 ”) yiNqaku leGlasi kwabo bafuna ifom encinci kunye nefomathi. Iqala kwi- $ 39.58 ngenyanga iinyanga ezingama-24 kwiNtlawulo yeDivayisi yeVerizon (0% APR; $ 949.99 yokuthengisa).
Into ekufuneka uyenzile kukuthenga i-Galaxy Qaphela 10 + 5G kwiVerizon ngesicwangciso esifanelekileyo kwizifakelo zeenyanga ezingama-24, kwaye ufumane iNqaku 10 kwityala elinye. Icandelo elibi kukuba uyakube uhlawula iVerizon kunye neapos s $ 30 yomrhumo wokwenza kusebenze, kunye nazo zonke iirhafu ngenxa yeefowuni zombini ngexesha lokusayina. Ukuba unokurhoxisa ngaphambi kokuba ixesha lokufaka liphele, ukule mali yeNqaku 10 kunye neapos s $ 949.99 ibhalansi, nayo. Izaphulelo ziya kuqala ukufika ngohlobo lweekhredithi zetyala emva kokuba kudlule amaxesha amathathu okuhlawula, kodwa iiapos ziseyinto enkulu kwisiphatho esikhulu kakhulu, kunye nenethiwekhi enkulu eMelika ukuqala. Nazi zonke iVerizon & apos; Qaphela amanqaku ali-10:
Abathengi kunye nabathengi beshishini abathenga i-Galaxy Note10 + 5G banokufumana i-Galaxy Note10 yasimahla xa betshintshela kwiVerizon okanye bongeza i-Verizon Unlimited line1 entsha.
Abathengi abatsha nabasele bathengisa nge-smartphone efanelekileyo kwaye bagcina ukuya kuthi ga kwi-450 yeedola. Ngaphezulu, banokufumana i-MasterCard ehlawulwa kwangaphambili engama- $ 200 ukuba batshintshele kwiVerizon, bathenge i-Galaxy Note10 kwintlawulo yezixhobo kwaye babhalisela iVerizon Unlimited2.
Lungiselela kwangaphambili i-Galaxy Note10 namhlanje kwaye ufumane ivawutsha yesipho efikelela kwi $ 150 kwi-Samsung.com.
Okokugqibela, onke amatyala eGalaxy Note10 kunye nabakhuseli bekhusi baya kuba bepesenti ezingama-25% ngexesha langaphambili.
Ixabiso le-AT & T kunye nexabiso le-10 + kunye neBOGO
Imvula kunye ne-apos; Imvula Qaphela i-10 ye-BOGO ejongene neMelika kunye nabaphathi abakhulu ekuphehlelweni. Emva kokuba iT-Mobile ibhengeze isivumelwano simahla seNqaku 10 kuye nakubani na ofumana, ewe, enye iNqaku 10, I-AT & T iyalandela ezinyathelweni zayo, nazo. Umthuthi uhambisa iNqaku 10 kwi-intanethi nakwiivenkile nge-23 ka-Agasti nge-33.34 yeedola kwiinyanga ezingama-30 kwisicwangciso se-AT & T esilandelayo.
Ngexesha elilinganiselweyo, abathengi be-AT & T banokufumana i-Samsung Galaxy Note 10 yasimahla xa bathenga enye iNqaku 10 okanye i-10 + kwi-AT & T, ngokusisiseko isivumelwano esifanayo kwinto esetyenziswayo yiT-Mobile. Umahluko kukuba i-AT & T ifuna ukuba uyifumane kwisithuba seenyanga ezingama-30 sokufakwa kwesicwangciso, hayi umzamo weminyaka emibini. Imali eyi-30 yokuqalisa iya kusetyenziswa kumgca omtsha ngokunjalo, kunye nazo zonke iirhafu ezifanelekileyo. Nazi & apos; ushicilelo olugqibeleleyo:
Thenga ezimbini ezifanelekileyo. I-Samsung Galaxy Note10 256GB, i-Note10 + 256GB okanye i-Note10 + 512GB (enexabiso ukuya kuthi ga kwi-1200 yeedola) kwi-0% ye-APR yokufaka i-agmt (i-30 mos. Ukuya kuthi ga kwi-40 yeedola / mo.)
I-T-Mobile Qaphela i-10 kunye ne-10 + ixabiso kunye neBOGO
I-T-Mo ibhetele Isivumelwano seBOGO kwiNqaku 10, njengoko isebenza ngokuthenga zombini i-Samsung Qaphela 10 okanye iNqaku 10+:
Ukuqala nge-7 ka-Agasti ngo-9: 01 pm, -odola kwangaphambili i-Samsung Galaxy Note10 okanye i-Note10 + kwaye unyuke uye kufikelela kwi-300 yeedola ngetyala elinye kunye neVirtual Express Prepaid Mastercard xa ufumana isixhobo kwisicwangciso seT-Mobile esingenamdla (EIP) kwaye urhwebo kwizixhobo ezifanelekileyo. Ukuba awufuni uku-oda kwangaphambili, unokufumana isivumelwano esifanayo xa i-Note10 okanye i-Note10 + zifumaneka kwiivenkile nakwi-intanethi ngo-Agasti 23.
Ukuqala nge-23 ka-Agasti, khetha i-Samsung Galaxy Note10 okanye i-Note10 + kwaye ufumane i-Kumbuka10 SIMAHLA okanye ukuya kuthi ga kwi-950 yeedola kwi-Note10 + ngeekhredithi zenyanga ezingama-24 xa ufumana izixhobo kwi-EIP kwaye wenze kusebenze (abathengi abakhoyo) okanye ezimbini (abathengi abatsha) ) Imigca emitsha kwiMagenta Plus okanye kwiT-Mobile ENYE kunye neentsapho.
Ngapha koko, unokudibanisa ezo zinto kunye nesithembiso esivela kwi-Samsung.com ukwenza 'iGlobal Kit yakho,' ukuya kuthi ga kwi-150 yeedola kwityala le-Samsung, kunye nesilingo simahla seenyanga ezintandathu seSpotify Premium.
Imodeli ye-Samsung Galaxy Note10 256GB iqala kwi- $ 0 ezantsi, i- $ 39.59 / inyanga (ixabiso elipheleleyo lokuthengisa: $ 949.99), imodeli ye-Note10 + 256GB iqala kwi- $ 149.99 ezantsi kunye ne- $ 39.59 / ngenyanga (i-FRP: $ 1099.99) kunye nemodeli ye-Kumbuka10 + 512GB iqala kwi- $ 249.99 ezantsi, $ 39.59 / ngenyanga (i-FRP: $ 1,199.99) zonke iinyanga ezingama-24 zabathengi abaqeqeshiweyo kwisicwangciso seT-Mobile sokungabikho komdla.
Elona nqaku liNqaku li-10 + liSamsung, ukuThenga okungcono, iSam & Apos s Club kunye neAmazon
Isamsung kunye neapos s simahla Qaphela i-10 yoku-oda kwangaphambili izipho
Akukho nto ibetha simahla, kwaye xa kufikwa kwi-Samsung, ihlala iswiti imbiza (okanye ibamba ukubethwa) ngamaxabiso ayo efowuni. Inqaku le-10 alikho ngaphandle, kwaye i-Samsung ikushiyela ukhetho apha.
Abathengi aba oda kwangaphambili i-Samsung Galaxy Note 10 phakathi kuka-Agasti 8, 2018 nge-9: 01 pm PT kunye no-Agasti 23, 2018 e-8: 59 pm PT, bonke baya kufaneleka ukuba bafumane ivawutsha yesipho efikelela kwi-150 leedola ukusuka kwi-Samsung.com.
Ukufumana isiqwenga sesipho sakho samahhala seNqaku 10, kuya kufuneka ukhuphele usetyenziso lweVenkile ye-Samsung kwivenkile kaGoogle Play, yiya kwi-Inbhokisi yam esuka kwimenyu, ucofe i-Work Smarter, Play Harder offer. Inketho ethi 'BONA UKUBA NDIKUFANELEKILE' iya kwenza ukuba i-Samsung ifumane ukufikelela kuyo kunye nokulawula iifowuni kunye nokufikelela kunxibelelwano lwakho, ujonge isixhobo sakho, emva koko ucofe ku 'BHALISA NGOKU' ngesibonelelo. Ukuyisebenzisa kulula njengokungena kwiakhawunti yakho ye-Samsung, kunye nokukhetha enye yeendlela ezintathu onokuthi ukhethe kuzo.
Eyona nto ithengiweyo yokuthenga i-10 kunye ne-10 + yeyona-Aura Blue ekhethekileyo
Ngelixa i-Best Buy inganikeli BOGO eyeyayo, ukugcinwa nje ukuya kuthi ga kwi-700 yeedola ngokurhweba ngaphakathi, kunye ne-Samsung kunye neepos zezakho izaphulelo kunye nezaphulelo, iphethe umbala okhethekileyo we-Aura Blue kwiGalaxy Note 10+ onokuyenza fumana kuphela kwi-Best Buy.
Elona nqaku liphezulu le-10 kunye ne-10 + yokuya kwiklabhu yeSam & apos; s
Ngelixa i-Costco ithatha ukupasa kwiNqaku elungileyo le-10 okanye eli-10 + ngeli xesha, esinye isaphulelo sobulungu sangena kwindawo yaso. Iklabhu yeSam & apos; s iya kukunika ikhadi lesipho elingama- $ 200 ukuba ulibeke ngaphezulu kwayo nayiphi na into onokuyithatha kwiiflegi ezintsha zeSamsung.
Ke, ukuba ufumana, yithi, ezimbini zeVerizon Qaphela ezili-10 ngexabiso lenye, ungafikelela kwizigidi ezingama-150 zezipho zeSamsung, kunye nekhadi lesipho leklabhu le- $ 200 Sam & apos, elimnandi kakhulu. Izithintelo eziqhelekileyo ziyasebenza-awunakusebenzisa ikhadi lesipho ukuhlawula iifizi zobulungu bakho okanye ulisebenzise ukubetha ixabiso lephepha le-10. Bummer, kodwa zininzi izinto ezingafunyanwa kwisaphulelo kwiKlabhu yaseSam & apos eneBenjamin ezimbini.
lg stylo 6 uphononongo lwekhamera
I-5g sim khadi t ehambayo
Isigama sokuVavanya ukuSebenza
I-T-Mobile kunye neapos; s Samsung Galaxy Qaphela 8 ukufumana iOreo ukuqala ngeCawa
I-Barclays: Inguqulelo yePremiyamu yeVerizon kunye neapos; s Go90 app inokuba yidatha yasimahla kumrhumo wenyanga
I-AppleCare + ye-iPhone SE ixabisa kuphela i-79 yeedola, isezantsi ukusuka kwi-129 yeedola ye-iPhone 8
UGarmin Vivosmart 4 uhamba emva kweFitbit Charge 3 yoyilo oluncinci, inzwa yenkomo yokubetha
Uhlelo lokuzonwabisa lweLomotif luhlanganisa iiklip zakho kunye neefoto kwiividiyo zomculo ezilungele i-Instagram, Vine kunye ne-Twitter
Uyithumela njani iAnimoji kuFacebook Messenger, WhatsApp, i-imeyile, naphina apho ufuna khona ...